Radio Asal 88.6 MHz – Jowhar _ Soomaaliya » Deeq bixiyayaasha Caalamka oo loogu Baaqay wax ka Qabashada Fatahaadaha webiga shabelle.
Deeq bixiyayaasha Caalamka oo loogu Baaqay wax ka Qabashada Fatahaadaha webiga shabelle.
In ka badan 15 tuulo oo ay degan yihiin beeraley ka soo kala jeeda degmoyinka balcad iyo jowhar ee ka wada tirsan gobolka shabellaha dhexe ayaa waxaa xiligini ku soconaya biyaha webiga shabelle kuwaasi oo saameyn kala duwan oo dhanka isku socodka ku yeeshay bulshada degan tuuloyinkaasi.
Cabdulle macaani adeerow waxa uu ka mid yahay waxgaradka ka soo jeeda tuulada xawaadley ee ka tirsan degmada balcad ee gobolka shabellaha dhexe.
Cabdulle waxa uu idaacada asal kula hadlay qadka talefanka waxaana uu usheegay in ay jiraan dhul beered gaaraya 13 kun oo hekter kuwaasi oo ay ku beernaayen dalagyo kala duwan ay noqdeen kuwo biyaha webiga ee tanka badan ay saameyn xun ku yeeshen.
Mar aanu weydinay sida xal looga gaari karo ayuu sheegay in loo baahan yahay kaalmo caalami ah oo lagu caratuurayo hareeraha webiga shabelle iyada oo uu sheegay in ay jireen dadaalo yar oo wax looga qabtay fatahaada webiga balse aanay u dhigneen kuwa kaafin kara badbaadada beeraha tuuloyinkaasi.
Tuulooyinka Tuugaarey oo hoos tagta jowhar maqdas iyo jameeco oo hoos taga degmada balcad waxay ka mid yihiin meelaha ugu badan ee saameynta muuqata ay ku yeeshen fatahaadaha webiga shabelle sida uu Cabdule Macaani Adeerow uu Asal radio usheegay.
Beeraleyda xiligani u muuqda in ay go,doon sii galayaan ayaa ah kuwo aanan heysan qalabka looga shaqeyo beeraha awoodana aanan ulaheeyn in caratuur loogu sameeyo webiga loona baahan yahay in deeq bixiyayaasha caalamka ay il gaar ahaaneed ay ku eegaan xaalada beeraleyda beerahooda ay biyaha webiga dul sabeynayaan.